न्युयोर्क क्षेत्रमा तीनदिनमा चार बम, मिनेसोटा आक्रमणमा आतंकवादी ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
न्युयोर्क क्षेत्रमा तीनदिनमा चार बम, मिनेसोटा आक्रमणमा आतंकवादी !
न्युयोर्कमा बम बिष्फोट लगत्तै सोमबार विहान न्युजर्सीमा अर्को बम भेटिएको छ । यसअघि शनिबार न्युजर्सीमा पनि बम बिष्फोटको घटना भएको थियो ।
सोमबार बिहान न्युजर्सीको एलिजाबेथमा ट्रेन स्टेशनमा बिष्फोटक पदार्थ भेटिएपछि सुरक्षाकर्मीहरुले त्यसको जाँचबुझ गरिरहेका छन् । मेयर क्रिस्टियन बल्वेजले तार र पाइपसहितको बस्तु पड्काउन तयार पारिएको बम हुनसक्ने बताएका छन् । सोमबार बिहान त्यसक्षेत्रमा बिष्फोटको आवाज सुनिएको अमेरिकी संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
यसअघि शनिबार न्युयोर्कको म्यानहटनमा एउटा बम बिष्फोट भएको थियो भने अर्को नपड्केको बम फेला परेको थियो ।
न्युयोर्कमा शनिबार बिष्फोट लगत्तै अर्को बम फेला पारेर निस्तेज पारिएको थियो ।
म्यानहटनको एभिन्यु अफ अमेरिका र सेभेन्थ एभिन्युको बीचमा २३ औं स्ट्रीटमा शनिबार राती साढे ८ बजेतिर भएको बिष्फोटमा २९ जना घाइते भएका थिए ।
यसैबीच अधिकारीहरुले संदिग्ध पाँचजनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेका छन् । तर कसैबिरुद्ध पनि अभियोग नलगाइएको जनाइएको छ ।
न्युयोर्क र न्युजर्सीमा तीनदिनको अन्तरालमा चारवटा बम भेटिएपछि न्युयोर्कको यातायातका हबहरुमा थप १ हजार सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिएका छन् । यी सबै घटनाहरुसँग शनिबार अमेरिकाकै मिनेसोटामा भएको आक्रमण सबन्धित भए नभएकोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मिनेसोटामा आक्रमणकारीले चक्कु आक्रमण गर्दा ८ जना घाइते भएका थिए । आक्रमणकारी पनि प्रहरीको गोलीले मारिएका थिए । यो घटनाको जिम्मा आतंकवादी संगठन स्लामिक स्टेटले लिएको छ । एफबीआईले पनि यो घटनाको अनुसन्धान आतंकवादी हमलाका रुपमा गरेको छ । आतंकबादी संगठन आईसीसले हमलामा संलग्न व्यक्ति आफ्ना सिपाही भएको बताएको थियो ।